समयको महत्त्व « aamsanchar.com , aamsanchar
समय गतिशिल छ । समयले कसैलाई परिवर्तन गरेर परिवर्तन पनी हुदैन । अनी कसैले रोकेर पनी रोकीदैन । यो केवल प्राकृतिक चक्र हो । उचित समयमा आफनो लक्ष र उदेश्य अनुरुप कार्य सम्पादन गरेमा सफल भइन्छ । तर एक सेकेन्डको फरकले पनी सयौ गुणा पछी पर्न सक्छ । नेपाली समाजमा प्रचलित एक उखान छ ।
समयले कहिल्यै पनी पर्खीदैन । बगेको खोला फर्कीदैन । वास्तवमा मानिस ढुङगे युगबाट विस्तारै समयको समयको गती र विज्ञानले गरेको उन्नतीले मानिस लाई ढुङगे युग बाट रुपान्तरण गरेको छ । मा्र!! ए्निस समयको महत्वसय ज्फ? बुझेकै कारण विज्ञानले गरेको खोज अनुसन्धान तथा नविनतम आविस्कारले मानव जिवन शैलीमा सरल भन्दा सरल बनाउदै लगेको छ ।
मानिस गर्भावस्था देखी नवजात !दशिशु अवस्था , शैसव अवस्था पुर्व वाल्यावस्था र प्रौढा अवस्था मानिसले जन्मे देखी सात अवस्था पार गरी उसको मृत्यु हुन्छ । समयले मान्छे लाई जबनम देखी मृत्यु सम्म पछ्याई रहन्छ । जसले समयको महत्व लाई सही रुपमा बुझ्न सक्यो उसले आफ्नो जिवन कालमा राम्रो र सकारात्मक कार्य गर्न सक्षम हुनछ । भने जसले समय लाई चिन्न सक्र्दैन उसको जिवनमा सफलता पाउन सक्र्दैन ।
मानव जिवनमा समय सङघर्ष र सम्झौता तिनवटा पाटा रहेको हुन्छन । सङघर्ष भन्नाले मानिस जन्मे देखी मृत्यु प्रयत्न सम्म प्रकृतीमा गर्ने सम्पूर्ण कार्य भन्ने बुझिन्छ । यो विशाल संसारको जसले सङघर्ष गर्न सक्यो उसकै कल्याण हुन सक्छ । प्राचिन कालमा डाइनोसर नामक जनावर यस पृथ्वीमा जिवीत थिए तर समय अनुसार सङघर्ष गर्न नसकेर यो धर्ती बाटै लोप हुन पुग्यो । तर मानिस समय अनुसार सङर्ष गर्दै अघी –अघी बढ्दैजादाँ यो २१ औ सताब्दी कै सुन्दर प्राणी को रुपमा परिचित छ ।
मानव जिवनमा सङघर्ष मात्रै गरेर पुग्दैन । सम्झौता पनी उत्तीकै खाचो रहेको पाइन्छ । सम्झौता भनेको दुई पक्ष विच भएको मध्य विन्दु सहमती भन्ने बुझिन्छ । यद्धपी समयको बाहाप सङगै सङघर्ष र सम्झौता पनी उत्तीकै महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । नेपाली समाजको परिप्रक्षमा भोलीबादले खुटटो गुमाउदै आएको पाइन्छ । नेपाली नागरिकहरुले अत्यावश्यक काम पनी भोली नै गरौला भन्छन तर खाना आजै भन्छन रे ?
आजको समकालनि परिवेष लाई ख्याल नगरेकै कारण नेपाली हरु पछि पर्ने गरेका छन् । पश्मिेली देशहरुले समयानुकुल मानव संघसाधनको समुचित प्रयोग गरेर आफुलाई सर्व विकसित देशको रुपमा चिनाउन सक्षम भएका छन् । त्यसैले संसारको सबै भन्दा अमुल्य चिज समयलाई सहिरुपमा सखुपयाग गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो फल मिल्नेछ ।